Home Insurance Kowaad Time Home Milkiilayaasha – Hiiraan News
Hiiraan and Minneapolis Somali News
Home Insurance Kowaad Time Home Milkiilayaasha
Maamulka gobolka Hiiraan ayaa sheegay in dhawaan dib u dayactir ay ku sa
Somali’s in Minneapolis
Trump Attacks Gillibrand and Blames Democrats for Women's Allegations Against Him
A Closer Look at the Somalis in Minneapolis
Somaili News and Resources in Minneapolis
Suuqa guryaha ayaa soo gaaray in MN iyo dad badan ayaa iibsiga gurigooda ugu horeeya.
Ogaanshaha gadashada talooyin caymiska guriga fudud qaar ka mid ah milkiilayaasha guriga waqti iyo dadka adeeganaya caymiska guriga uGu horeysay ka heli karto hoos imaad caymis fiican oo kayd weyn.
Caymiska guriga Su’aalaha Jawaabay …
Waa maxay hantida iyo khatar baan waa laga reebaa aan siyaasadda?
Sida caadiga ah, caymiska ma khuseeyo dhaawac keena daadka, biyaha oogada, biyo in taageeray ilaa qasabadaha ama mareenada, dhaqdhaqaaqa dhulka, dhaawac nuclear, dagaal, iwm mas’uuliyad shakhsiyeed iyo lacagta caafimaad ma khuseeyaan howlgalka, lahaanshaha, isticmaalka, iwm, oo ah diyaarad kasta, gaari, Mu, farsamada biyaha ku shaqeeya in ka badan 50 hooras motor; dhaawac jirka ah ama waxyeello jireed keena fal ula kac ah u damaanad qaaday.
Maxaa dhacaya haddii aan dab? Sidee baan u ururiyaan, waayo, hantida shaqsi ahaanta? Haddii aad siyaasadda bixinaya bedelka ama kaliya qiimaha lacagta caddaanka dhabta ah ee Xoolihiinna, waxaa lagu siin doonaa guri gaarka ah in aad muujin kartid in aad iska leh waqtiga khasaaro. Waa fikrad aad u wanaagsan si loo sii ah in alaabada taariikhda meel aamin ah. Sidoo kale, si ay u caawiyaan in aad xasuusato wixii aad lahaa, waxaa aad kuu caawinaysa
Haddii aan dhaawaca biyaha ka midyahay xaalkoodu, aad baan la daboolay? No, waxaa loo baahan yahay siyaasad daad oo kala duwan si ay u daboolida khasaaraha hantida aad sababa daadad. Ilaa iyo inta aad bulshada ka qayb Qaranka Flood Barnaamijka Caymiska (NFIP), aad u qalanto si aad u iibsato caymiska daadka. Waxaan kaa caawin karaa in la go’aaminayo haddii aad bulshada ka qayb NFIP ah.
Maxaa dhacaya haddii aan lumin xoog iyo cuntada ee Qaniimada, qaboojiyaha ii? Siyaasadda A aasaasiga ah sida caadiga ah ma daboolayo khasaaraha this; Si kastaba ha ahaatee, caymiska korontada korontada ayaa diyaar u ah lacagta caymiska sahlan oo dheeraad ah.
Wakiilada caymiska guriga Independent ee MN
Posted on May 27, 2015 May 28, 2015 Author tpeddycoTags auto insurance MN, First Time Home Buyer Info, Home Insurance MN, Wakiilada caymiska guriga Independent ee MN
Previous Previous post: Maamulka gobolka Hiiraan ayaa sheegay in dhawaan dib u dayactir ay ku sa